ဝိုင်းပြီ စဉ်းစားပေးကြပါ ဘာကြောင့်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ိုင်းပြီ စဉ်းစားပေးကြပါ ဘာကြောင့်လဲ
၀ိုင်းပြီ စဉ်းစားပေးကြပါ ဘာကြောင့်လဲ
Posted by laaminnthar on Aug 8, 2010 in News | 11 comments
သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ သူတို့အသက်ကိုသူတို့ ချစ်ကြပါတယ် သူတို့ဘယ်ဘ၀ကလာသလဲ သူတို့မသိကြပါဘူး၊ သူတို့ခန္တာ
သူတို့အသက် ဆုံးရှုံးမှာကို ကြောက်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသေခံဗုံးခွဲတယ်ဆိုတာ အတော်လေး ခေတ်စားသလိုဖြစ်နေတယ်၊
ဘာကြောင့် အသေခံရဲလဲ ဘယ်လိုမက်လုံးတွေက သူတို့ကို အသေဆိုးနဲ့သေဖို့ စွဲဆောင်နေလဲမသိပါဘူး
ဆော်နေကြတာများ နေ့တိုင်း သတင်းစာထဲမှာ တွေ့နေရတယ် သူတို့ကို သေရဲတယ်ဆိုပြီး လေးစားရမလား အဓိပါယ်မဲ့ အသခံတယ်ဆိုပြီး
ရှုံ့ချရမှာလား ၊ အစ္စရေးကလည်းပါလစ်တိုင်းတွေကို ဆော်နေတာပဲ ပါလစ်တိုင်းတွေကလဲ သတ္တိကောင်းတာလား ဦးနှောက်မရှိတာလား၊
ဒုံးကြည်နဲ့ လှမ်းပြီး ပစ်ပစ် နေတယ် သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်က ဘာမှအရာမရောက်ဘူး အစ္စရေး တစ်ယောက်မှမသေဘူး အဲဒါကိုပဲ ပျော်ပျော်ကြီး
တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး လှမ်းပစ်နေတယ် ပါးရိုက်ရင်နားကိုက်တယ်တဲ့ အစ္စရေးက လေယဉ်တွေနဲ့ တက်ပြီး ဗုံးကြဲပါလေရော အဲဒီအခါ နိုင်ငံတကာကလည်း
ဘာမှမပြာနိုင်ဘူးလေ၊ သေလိုက်ကြတာ ပိုးဆိုးပက်စက် ပါလစ်တိုင်းတွေက ဘာကြောင့် အဲဒီလိုလုပ်တာလဲ မနိုင်မှန်းသိတယ် သေကြမယ်မှန်းလည်း
သိကြမှာပဲ တိရိစ္ဆာန်တောင် သူမနိုင်ရင်မတိုက်ပါဘူး သူတို့က တိရိစ္ဆာန်လောက်တောင် အသိတရားမရှိကြတာလား စဉ်းစားမရလို့
လမင်း သာ has written 1 post in this Website..
View all posts by laaminnthar →
တကယ်စဉ်းစားစရာကို မလိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။
ဘုရားသခင်က သူတို့လိုလူမျိုးတွေကို ဆင်ခြင်တတ်တဲ့
ဦးနှောက်မထည့်ရသေးခင်မှာ လူဖြစ်သွားတဲ့အ ကောင်တွေပါ။
သူတို့ ကသွေးစွန်းနေသောလက်နဲ့ လူသတ်ကောင်တွေပါ။
မိုက်မဲသူ ဦးနှောက်မရှိသူတွေဆိုတော့ သူတို့စိတ်အဆာပြေအောင် လုပ်ရဲတာပေါ့။
ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်သူ ပြဿနာတက်ရင် တကယ်ခံစားရတာ
နစ်နာတာ ဒုက္ခရောက်ကြရတာက ပြည်သူပြည်သားတွေပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်အဆာပြေအောင် ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မယ့်အလုပ်တွေကို
စစ် ဆိုတာ ကိုယ်က ရန်စ မိလို.ဖြစ်ဖြစ် သူကပဲ ကျူးကျော်လို. ဖြစ်ဖြစ် စစ်ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ. သေကြမှာပါ ဒါပေမဲ.အားနည်းတဲ. ကောင်က ရန်စနေတာ ဆိုတော. သူ.နောက်မှာ အင်အားကြီး တဲ.ကောင် ရှိလို.ပေါ. အထင်ကိုပြောတာပါ စစ် ဆိုတာ ပရိရယ်ကြွယ်တဲ. ချက်ထိုးနည်း တစ်ခုပဲ လို.မြင်ပါတယ်
ငြိမ်ခံနေလည်း ကျူးကျော် သတ်ဖြတ်နေမယ့် အတူတူ သွေးရှိကြောင်း ပြန်ပြနေကြတာပါ။ ခွေးတောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်သေးတာပဲ။ သေနတ်နဲ့ ပစ်နေတာကို ခဲနဲ့ ပြန်ပေါက်တာဟာ သာမန်ကြည့်ရင်တော့ ဦးနှောက်မရှိသလိုပါပဲ။ ဖိနှိပ်ခံရပါများလာရင် ပြန်လည် ပေါက်ကွဲတတ်ပါတယ်။ အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း မှာ ကြီ။မားတဲ့ ကွဲပြားမှု တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုရင် အစ္စရေးတွေက သေရမှာ ကြောက်သလောက်၊ ပါလက်စတိုင်းတွေက သေရမှာ ပျော်ကြပါတယ်။ ဒါ အမျိုးသားရေးပါပဲ။ သူတို့အတွက်ပေါ့။ အစ္စရေး ဟာ လက်ရှိ နာဇီလက်သစ် ပါပဲ။ နာဇီ တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်၊ နှိပ်စက်နည်း ပုံစံတော်တော်များများကို ကော်ပီကူးချ ကျင့်သုံးနေဆဲပါ။ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ အထောက်အထားတွေ လိုချင်ရင် မေးလ်လိပ်စာ ပို့ပေးပါ။ ကျွန်တော် နှိုင်းယှဉ်ဓါတ်ပုံတွေ ပို့ပေးပါမယ်။ အင်တာနက် က ကျွန်တော် တစ်ခေါက် ကူးယူထားဖူးပါတယ်။ မြန်မာတွေ အားလုံးလည်း ဖိနှိပ် ညှင်းပန်း ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
အသေခံဗုံခွဲရဲတဲ့သတ္တိကိုပေးတာအစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေပါ ဂျီဟတ် လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဘာသာရေးစစ်ပွဲမှာအသေခံရဲတဲ့သူကိုတမလွန်ဘဝမှာ အလ္လာ အရှင်မြတ်ကအထူးကောင်းခြင်းကိုပေးတော်မူတယ်လို့ တွင်တွင်ကြီးဟောပြောပို့ချနေတဲ့ဆရာကြီးတွေဟာအများအားဖြင့်မိန်းမလေးယောက်လောက်ယူခလေးတဒါဇင်လောက်မွေးကိုယ်တိုင်တော့သေမှာအကြောက်သားသနားဘို့ကောင်းတာကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပါ
တကယ် အဲဒီအကိစ္စကို ပြောရင် အများကြီးပါပဲ
သေချာတာကတော. ငယ်ငယ် လေးထဲက ပုံစံခွက်ပဲ
ဘာသာရေး ရှုထောင်. စဉ်စားတာပါ
မြန်မာပြည်မှာလည်း သိပ်တောင်မကြာသေးချိန်ကတင် “စွမ်းအားရှင်”ဆိုပြီး ရှိတာပဲ။
ငွေပေးတယ်လေ…။ ဒေါ်လာ ၂သောင်း – ၅သောင်းဆို ဘ၀ရင်းပြီး လုပ်ကြမဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
အသေခံဗုံးခွဲတဲ့သူတွေက အများအားဖြင့် သေပြီးရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတဘ၀စာ ကူညီထောက်ပံ့ ပေးပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ်လည်း နာမယ်ကျန်ရစ်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးကတော့ ကလေးကထဲ လူနဲ့မတူအောင် ရိုက်သွင်း( ဘရိန်းဝပ်ရှ်)အလုပ်ခံထားရသူတွေ။
ဂျေရုစလင်ဆိုတဲ့နေရာက တိုရစ်ဇင်နဲ့တင်တနှစ် ဘီလီယံချီဝင်တဲ့နေရာပဲ။ လုနေတာပေါ့။
-“It turns out that he has raised that amount and it’s $25,000 per family, not $10,000 per family,” Rumsfeld said.
-Hamas/ Iran paid the families ofasuicide bomber $20,000
-“Some people stop me on the street, saying if you increase the payment to $50,000 I’ll do it immediately,” Safi said.
အသေခံဗုန်းခွဲတာ ဖတ်ဖူးသမျှပြောရရင် ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့
ပရောဂ အများဆုံးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ် ပြောရရင်အများကြီးပါဘဲ
အသေခံရတာကို ကြေနပ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးရဲ့
ပုံစံခွက်တစ်ခုပဲ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အယူသည်းမှုလို့ပြော
လည်းရပါတယ် တည့်တည့်ပြောရင် အကျိုးမျှော်ပြိး ညောင်ရေလောင်း
တာပဲ။လိုအပ်လို့ စွန့်လွှတ်စွန့်စားတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ မိုက်ရူးရဲ နဲ့